आइसोलेशनमा राखिएको व्यक्तिको मृत्यु ! – Sagarmatha Online News Portal
आइसोलेशनमा राखिएको व्यक्तिको मृत्यु !
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको आइसोलेशनमा राखिएका १ जनाको मृत्यु भएको छ ।
मेडिकल कलेजका डा. रोमन किदवाईका अनुसार, बर्दिया गुलरियाका इसराइल बेहनाको मृत्यु भएको हो । बेहना दमका बिरामी थिए । उनलाई २ दिनदेखि आइसोलेशनको आइसीयूमा राखिएको थियो । बेहनाको स्वाव परीक्षण भइसकेको थिएन ।
डा. किदवाईले मृतकको स्वाव परीक्षण गर्न लागिएको जानकारी दिए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेका अधिकृत एवं कोरोनाका फोकलपर्सन नरेश श्रेष्ठले मृतकको स्वाव परीक्षण र शव कहाँ राख्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए ।
बाँकेका भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र कोहलपुर मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन कोरोना आशंकितलाई राखिएको छ । अहिलेसम्म भेरीले २३, मेडिकल कलेज नेपालगञ्जले २१ र कोहलपुर १३ वटा स्वाव पठाएकोमा नेगेटिभ आइसकेको छ ।
यी अस्पतालबाट थप १५ वटा स्वाव पठाइएको छ । त्यसमध्येमा ६ वटाको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ । बाँकेको नतिजा आइसकेको छैन । बाँकेमा अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ भेटिएको छैन ।
जिल्लामा ३ सय ९९ जनाको आरडीटी जाँच भएकोमा सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ ।
Published On: ६ बैशाख २०७७, शनिबार